Tranonkala Sosialy Shinoa Miaro Ny Filoha Lefitra Amerikana Amin’ireo Fanehoan-kevitra Mikasika An’i Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Mey 2013 12:47 GMT
Niatrika tsikera mamaivay avy amin'ny mpianatra iraisam-pirenena Shinoa ny Filoha Lefitry ny Firenena Amerikana Joe Biden taorian'ny niantsoany an'i Shina ho firenena tsy afaka “mieritreritra zavatra hafa” na “mifoka rivotra malalaka” nandritra ny kabariny fanokafana tao amin'ny Anjerimanontolon'i Pennsylvania.
Maro ireo mpianatra Shinoa iraisam-pirenena no manasokajy ilay tsikera ho mandratra / manafintohina. Andro vitsivitsy taty aoriana, Zhang Tianpu, mpianatra Shinoa iray ao amin'ny Anjerimanontolon'i Pennsylvania, sy ireo mpiaraka aminy dia nandrafitra taratasy ho an'i Biden mangataka fialantsiny.
Tsy ela dia lasa nihanaka be tao amin'ny media sosialy Shinoa ireo vaovao. Mihoatra ny 30,000 ireo vahoaka nandray anjara tao amin'ny fitsapan-kevitra tety amin'ny aterineto nampanaovin'ny “Tencent news” momba ilay raharaha – ho an'ny fanontaniana hoe “Hiala tsiny ve i Biden sa tsia?”, 70 isan-jaton'ny mpampiasa aterineto no namaly fa tsy tokony hiala tsiny izy.
Rehefa nizara ireo vaovao miaraka amin'ny lahatsarin'ilay kabary tao amin'ny fanaovana bilaogy kiritika an'ny tranonkala “Sina Weibo” ny lehiben'ny Google fahiny tao Shina, Kaifu Lee, ny 24 May, dia nahasarika tsikera maherin'ny 6.560 tao anatin'ny ora vitsy monja. Maro amin'ireo mpampiasa aterineto no nihevitra fa marina izay voalazan'i Biden, ary ireo hafa kosa nitsikera ireo mpianatra iraisam-pirenena.
Li Lifu, mpanoratra amina trano fanontàna iray any Tianjin no nanazava [zh] ny ampahany amin'ny antony nahatezitra ireo mpianatra :
Lahatsarin'ny kabarin'i Biden nifampizaràna betsaka tao amin'ny Sina Weibo. (Sary avy amin'i Sina Weibo)
“Yilitang Leyouyou” dia nampitaha [zh] ny fiainan'ireo mpianatra amin'ny kolejy any Shina sy ny fiainan'ireo any ivelany:
Mpampiasa Weibo “Pretending to be in New York / Milaza azy ho monina any New York” no nanoratra [zh] tamin-keso hoe:
“Zhu Mengxiang” nitanisa [zh] ohabolana Shinoa iray:
“Feng aili” [zh] nieritreritra fa nahakitika ny marika ny kabarin'i Biden :
Ny kaonty Weibo an'ny gazetin-tsekoly iray avy ao amin'ny Anjerimanontolon'i Tsinghua ao Shina dia nitatitra fa[zh]: